'नृशंस पर्खालहरु' : सम्झनाको इजेलमा जीवनको क्यान्भास,(प्रकाश सायमी)
विश्वको सबभन्दा नयाँ गणतन्त्र मुलुक नेपाल घोषणा भएको दिन म एउटा नयाँ पुस्तकमा भूमिकाबद्ध छु । व्यूनो आइरिशमा जन्मेका कवि बोर्खेस् मेरा प्रिय अति प्रिय लेखक हुन् । म उनलाई पढेपछि अरुलाई स्पर्श गर्न डराउँछु- त्यो उनको पुस्तकमा रहेको छन्द र गन्ध मर्ला भन्ने डर यथावत् रहन्छ । त्यही डरका बीचमा मैले बहिनी गीता त्रिपाठीको नव्यत्तम कृति नृशंस पर्खालहरु पढेँ ।
२०६५ जेठ १५मा पर्खाल ढलेपछि मैले त्यो नृशंस पर्खालको कथा विवृत्ति अतीतमनले दोहोर्याएर पढेँ तर समयको तस्वीरमा त्यो पर्खालको कथा- कथाजस्तो भइसक्यो ।
र म त्यही कथा पढ्दैछु- २०६३ बैशाख ७ गतेको । र त्यो कथामा नेपालको विगतका आन्दोलनको चित्र विचित्ररुपले प्रकाशमान छ । म पढ्दैछु-
आगोको कान फुक्यो
बतास बतासमात्रै रहेन अब
आगो आगोमात्रै रहेन अब
हुरी, बतास, आगोका सम्वाद नै गीताका कविताका पुँजी हुन् स्वीकारोक्ति हुन् । कवि बोर्खेस्ले कहीँ भने झैँ गीताका कविताका शक्ति-स्रोत पनि 'शब्दको ऐन्द्रिकता' हो । जीवनको केन्द्रीयशक्ति पनि त्यही हो (The central fact of my life has been the existence of words and possibility of weaving those words into poetry- Jorge Luis Borges_ .
गीताले कवितामा शब्दहरु कुँदेकी छिन्- बाँसुरीका प्वालहरु कुँदेजस्तै लयबद्ध ! झन् लयबद्ध !
गीताले कवितामा विचारहरु उनेकी छिन्-
प्रदर्शनी छ अक्षरको
सार्वजनीन शक्ति छ सत्यताको ।'
कविता त सर्वत्र हुन्छ तर विषयलाई बुन्ने क्षेत्र र अधिकार कविको निजी हो र त्यो नीजता नै कविको नीति हो जसका कारण उनी ओतर (स्रष्टा/प्रभु) भनिन्छन् । यहाँ गीता त्यस किसिमको निजीपनको पहिचान राख्छिन्-
डिको नभएका हरफहरु झैँ
बिथोलिइरहन्छन् मेरा पंक्तिहरु
के यो युगमा
म सुन्न पाउँदिन फेरी
मेरो बाल्यकालजस्तै सुन्दर
मेरो जीवनको धुन एकचोटि
उद्गीत कविता कवितांशको शक्ति स्मृति मात्र होइन स्मृतिको बलमा गुञ्जित यसको स्वरमा जीवनको उज्यालो र जगत्को सौम्यता छ; सहजता र सादापन नै यस्ता कविताको सार र अंश हुन पुगेका छन्- 'निस्तब्ध धुनहरु र 'नृशंस पर्खालहरु' कविका दुई फरक विचार हुन् प्रतिवेदन-निवेदन हुन् । जीवनको मायालुपन र त्यही मायालुपनमा पहिल्याएको कठोर बाटो त्यस सपनाका स्वरुप हुन् । कविता सर्वत्र छ तर त्यसमा 'कवि'को उपस्थिति अनुभौतिक होस् वा भौगर्भिक मायावी होस् वा बोधवादी । त्यो जरुरी छ त्यसैले पोल्याण्डका महाकवि ज्बीग्नीयेब हेर्वेत भन्छन्- "कविताको खाका हमेशा हावामा तैरिरहन्छ र कोही कवि त्यसलाई जमीनमा उतारेर त्यस्तो आकार दिन्छ जुन मनुष्यका लागि परिचित होस्, उसले बुझोस ।"
हेर्वेतले भने झैँ कविताको पहिलो शर्त 'सहजता' हो बुझिने कविता । त्यसैले हाम्रा महाकविले भनेका हुन्- "नलेखिएका कविता अझै सुन्दर हुन्छन् ।" त्यस्ता धेरै कविताको खोजमा गीता भ्रमणशील छिन्, परिचित छिन् । उनले बनाउने क्यान्भासमा उनकै विश्वासको इजेल प्रतिस्थापित छ र त उनी भन्छिन् सम्वादी स्वरमा-
'रगतको अभिलेखमाथि उभिएर
शहीदहरुको सपना पर्खिरहने
क्यान्भासको बलियो किनारा हो- चक्रपथ ।
(क्यान्भासको बलियो किनारा)
'तिम्रो चोर झ्यालबाट
अलिकति चियाएर हेर त !
त्यो उज्यालो अहिले
तिम्रै ढोका ढक्ढकाइरहेछ ।
'सपना' र 'उज्यालो' यहाँ एस्सोनान्स् बन्छन्- एस्सोनान्स् जसलाई हामी कविताको सौन्दर्य बुझ्छौँ । भनिन्छ- Where have you been my long lost lover. । यस पंक्तिमा एल ( L) ले त्यो भाव बोक्छ- constant sound has been repeated. Similarly, long, lost, lover (o) sound repeated producing assonance- The Theory of Poetry(2005,Pg 9) .
'सपना' 'उज्यालो' त्यस्तै शब्द भए हुनन् हाम्रा निम्ति । झन् ६३-६४ को आन्दोलनपछि त्यसले व्यापकता राख्छ । नगर-प्रशासन व्यक्ति-व्यष्टि समाज-धर्म कानुन-राजनीति सूचनाचक्र-समयदर्शन सबै-सबैतिर यसको भावदशा एउटै र यथता एवम् अर्थवत्ता पनि एउटै रह्यो तर यही सपना यही उज्यालो कविका निम्ति आगो हुन्- यही आगोले कैँयन् अवतारका श्रीपेच डढाए हुनन् । आगोलाई निभाउने कर्मकाण्डी करतुत धेरै फ्र्याङ्को, धेरै जियाउल हक, धेरै द'गालले नगरेका होइनन् । तर आगोलाई निभाउन खोज्दा त्यो धूवाँ बन्छ धूवाँलाई थुन्न वा लुकाउन मिल्दैन । त्यसले भित्तामा रेखी कोर्छ- त्यही रेखीको स्वरुप हो हाम्रा समकालीन कविका चिन्ताहरु ।
कवि स्रष्टा गीताका कवितामा धूवाँका ती रचना प्रस्ट र प्रख्य छन्- उनी कवितामा बोल्छिन् तर उनको बोली सामान्यजनको लोलीबाट लाभान्वित छ । उनको कविता विम्बित् छन् आमजनको आक्रोशबाट । उनका कतिपय तर विशेष कवितामा नेपाल र नेपालीको अनुहार छ औँलाको छाप-पहिचान छ ज्यूँदो-जाग्दो शहीदको जीवनदान छ । कविता सायद त्यही हो नलेखिए पनि नदेखिए पनि । १०४ वर्ष अगि चिलीमा जन्मेका कवि पाब्लो नेरुदाका अनुसर्गहरु सम्झिन्छु । भन्छन्- "मैले कवितामा हमेशा आम मान्छेको हात देखाउन चाहेँ । मैले यस्तो कविताको आश गरेँ जसमा औँलाको छाप देखियोस् । माटोको गारोका कविता जसमा पानीले गुन्गुनाउन सकोस् । रोटीको कविता जहाँ हरेकले खान सकोस् ।"
उनलाई सोधियो- "तपाईँ किन लेख्न चाहनुहुन्छ?"
उनको उत्तर थियो- "म एउटा वाणी बन्न चाहन्छु ।"
नोवेल पुरस्कार प्राप्त गरेका नेरुदा साँच्चैका विश्व नागरिक थिए- उनी कहिले राजदूत भए कहिले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार त कहिले राजनीतिक शरणार्थी तर उनी सदैव एक 'कविता-लेखक' भनी चिनिए । उनका कविता स्पेनी भाषामा मात्र होइन विश्वका हरेक भाषाका 'वाणी' भए । यो एउटा उपहासास्पद प्रसङ्ग नै भयो- उनका कवितालाई पनि राजनीतिक लेपमा नबुझिने बनाइएको छ । उनले एकपटक दुःखवश भने- "मलाई थाह छैन मलाई बुझ्ने कोसिस पनि भइरहेको छ कि छैन ।"
समयको स्वर अस्पष्ट हुन्छ- यहाँ बुझ्ने कुरा नबुझिने बनाउने सञ्जाल छ । कविता गर्नेहरु भित्रै पनि त्यो जालो छ । त्यो सञ्जाल नेपाली जनस्थानमा पनि सक्रिय छ । कविस्रष्टा गीताले १०४ वर्ष राणाशासनको छायामा टिकेको २४० वर्षको जर्जर शाहीशासन ढलेको र ढल्न अगिको पूर्वसन्ध्यामा जीवन र जगतलाई बुनेर लेखेका कविता उनका कठिन समयका शीर्षकहरु हुन् यसलाई बुझ्न गाह्रो छैन तर गीताका कठिन समयलाई दुःसाध्य बनाउने कसरत नहोस् यही कामना छ मेरो ।
गीतालाई मैले सोध्न पाएको छैन- उनी कविता किन लेख्न चाहन्छिन् तर उनले मलाई दिने उत्तर शतप्रतिशतवादी रुपमा यही हो भन्ने मेरो आत्मीय ठहर छ जहाँ उनी भन्छिन्-
'म समयको वृत्तभित्र
साङ्लाहरु भर्खरै चुँडालिएका
यदि गीताको उत्तर यही हो भने गीतालाई गीताका गुरुजनलाई गीताका असङ्ख्य अनाम पाठकलाई लाख-लाख सलाम मेरो ।
समय शक्तिको स्रोत बनोस्- यो पुस्तक जसका लागि समर्पित छ; गीताको जीवन लेखन सङ्घर्ष उनको निम्ति एउटा सुन्दर किताब बनोस् । यही कामनासहित-प्रथम गणतन्त्र दिवस- २०६५